Altay: KonyaRay Commuter Line waa Muhiimad Sida Mitirka | RayHaber | raillynews
HomeTURKEYGobolka Central Anatolia42 KonyaAltay: KonyaRay Commuter Line waxay muhiim u tahay mitirka
25 / 02 / 2020 42 Konya, Gobolka Central Anatolia, Tareenka Tareenka, tareenka, GUUD, KENTİÇİ Systems Rail, Headline, TURKEY, VIDEOS
altay konyaray khadka xaafadaha sida muhiim u ah metro
Duqa Magaalada Konya ee Uğur İbrahim Altay ayaa la kulmay xubnaha saxaafadda ee Konya waxayna sameeyeen ajandaha qiimaynta. Isaga oo ka hadlaya barnaamijka Xarunta Seljuk Congress, ayuu Madaxweyne Altay khudbadiisa ku bilaabay isaga oo siinaya macluumaad ku saabsan barnaamijyada iyo maalgashiga dhawaanta la sameeyay.
Duqa Magaalada Konya ee Uğur İbrahim Altay ayaa la kulmay wakiilo ka kala socday ururada warbaahinta maxalliga ah iyo kuwa maxaliga ah ee magaalada isla markaana qiimeeyay ajendaha. Isagoo tilmaamay in safka magaaladu uu muhiim u yahay metrooga Konya, Madaxweyne Altay wuxuu yiri; ayaa sheegay inay qorsheynayaan inay dhisaan 2024 kiiloomitir oo nidaamyada tareenka cusub marka la gaaro 65 oo leh khadad tareeno cusub, khadka magaalada, Konya Metro. Madaxweyne Altay wuxuu cadeeyay in Konya uu helay ilaha aad muhiimka u ah barnaamijka maalgashiga sanadka 2020 wuxuuna u mahadceliyay Madaxweyne Recep Tayyip Erdoğan.
MUHIIM AS BATHROOM LINE METRO
Markii dambe, Madaxweyne Altay, oo bayaan ka soo saaray khadka magaalada, oo borotokoolkiisa la saxeexay dhowaan, wuxuu yidhi, "Waxaan la saxeexnay borotokoolka KONYARAY Waddada Tareenka. Bilowga mashruuc muhiim u ah Konya waa la xaqiijiyey. Muhiimad weyn ayaan u leenahay mashruucan. Sababtoo ah waa bilow cusub marka loo eego isku socodka gaadiidka dadweynaha ee Konya. Marka hore, qandaraaska 17.4 kiiloomitir ee ka bilaaban doona Saldhigga Tareenka ee Konya illaa garoonka diyaaradaha ayaa la qaban doonaa sannadkan. Marxaladda labaad, waxaan haysanaa waddo dhan 26km oo tareen oo udhaxeysa Yaylapınar-Yeni Gar-Airport-OSB. Iibsiga Gawaarida waxaa sameyn doona Dowlada Hoose ee Magaalada. Marka taa laga reebo, dhammaan kaabayaasha dhaqaalaha iyo shaqooyinka suufiyada waxaa dhisi doona Tareenka Gobolka. Maalin kasta waxaa jira gaadiid ka yimaada Meram iyo Karatay oo u tagaya warshadaha ku yaal magaaladeenna. Gaar ahaan marka la joojiyo adeegyada aagagga Wershadeysan, Konya waxay u horseedi doontaa saameyn weyn taraafikada halkaas. Waxaan rajeyneynaa, inaan adeegsan doonno Xarumada cusub iyo isku xirka garoonka 2 sano gudahood. Sidaa darteed, fursad gaadiid dadweyne ayaa la abuuri doonaa markii ugu horeysay garoonka diyaaradaha. Gegada Diyaaradaha-Saldhigga-Old Station-kii hore ayaa lagu xiri doonaa khadka gaadiidka dadweynaha markii ugu horeysay. Shaqadani waxay muhiim u tahay Konya Metro ”.
Waxaan qorsheyneynaa inaan sameysanno 2024 KILOMETERS RAIL SYSTEM marka la gaaro 65
Isagoo bixinaya macluumaad ku saabsan horumarkii ugu dambeeyay ee Konya Metro, Duqa magaalada Altay wuxuu xusey in howshu ay si xawli ah usocdo wuxuuna yiri, “Wejigii dhismuhu wuu bilaabmay. Waxaan rajeyneynaa, inaan jeclaan laheyn inaan ka shaqeyno garoonka 'de facto guga'. Konya Metro waa maalgashiga ugu muhiimsan taariikhda Konya. Maalgalin 1 bilyan oo 194 milyan oo lira ah ayaa la samaynayaa waxaanan yeelan doonnaa khadka tareenka ee 21.1 km. Dhismaha jidkeena tareenka, waxaan wadooyin cusub u furaynaa dhismaha si aan usii wadno dhibaatada ugu yar ee taraafikada. Waxaan bilownay hawlgalkii dhabta ahaa ee Sultan Abdülhamid Han Street. Waxaan qorsheyneynaa inaan dhameystirno marxaladda koowaad dhammaadka sannadkan. Mar labaad, shaqooyinka la wareegidda ayaa ka bilaabmay Celaleddin Karatay iyo İsmail Ketenci Waddooyinka. Markaa, gaadiidka Konya wuxuu helayaa hanaan cusub. Annaga oo kaashanayna KONYARAY, metro, Barış Caddesi Tramway iyo Isbitaalka Magaalada Tramway, waxaan qorsheyneynaa inaan sameyno nidaam tareenka oo dhererkiisu dhan yahay 2024 kilomitir marka la gaaro 65. Tani waxay laba jeer iyo badh ka badnaan doontaa nidaamka tareenka hadda jira ee aan isticmaalno. Waxaan rajeyneynaa, inaan sida ugu dhakhsaha badan u siin doonno war wanaagsan oo ku saabsan tareenka Barış Caddesi. ”
Metro halkii laga sii wadi lahaa Konyaray Konyalıya?
Raiisel wasaare Fahrettin Altay ayaa furtay Mashruuca Narlıdere Metro